Fantaro i Niigaatikwe (Jordyn Flaada), hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ny 15-21 Aogositra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2019 8:21 GMT
Sary natolotr'i Niigaatikwe.
Amin'izao taona 2019 izao ao anatin'ny fanentanana media sosialy hanandratana ny fahasamihafàm-piteny an-tserasera, ifandimbiasan'ireo teratany Amerindiàna sy avy amin'ny Firenena Voalohany mpikatroky ho an'ny teny no sady mpanandra-peo ny fitantanana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mba hizaràna ny zava-niainan-dry zareo amin'ny famelomana aina indray sy ny fampahafantarana ny fiteny Teratany Amerindiàna sy ireo Firenena Voalohany. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Niigaatikwe (Jordyn Flaada) (@Niigaatikwe) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Rising Voices: Lazalazao anay ny momba anao..
Niigaatikwe no anarako ary avy amin'ny foko lynx . Ianarako ho fiteny faharoako ny fitenin'ireo Ojibwe miaina any Minnesota. Efa hatramin'ny 2011 aho no nianatra ilay fiteny tanaty fenitra manaraka ny ara-dalàna sy ivelany ihany koa, indrindra fa ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo, ireo resaka an-databatra natao ho an'ny fiteny, ny fahafahana azon'ireo olondehibe hilomana ao anatin'ilay fiteny sy fisindàna miaraka amin'ireo mpianatra ilay fiteny sy ireo mpiteny efa zokiolona. Miasa eny an-kianja ihany koa aho momba ny famelomana indray ny fiteny Ojibwe, izay manome ahy fahafahana marobe hanohy ny fandalinana sy fianarana amin'ny alàlan'ny fiasàna miaraka amin'ireo hafa mpianatra, mpampianatra ary mpiteny. Tia mivezivezy ao anatin'ny fanjakàna Ojibwe aho mitsidika ireo mpiteny efa zokiolona miaraka amin'ireo namako, ireo mpiara-mianatra ilay fiteny. Tia saka, tia manao ankosotra manatsara tarehy ary maka sary.
RV: Ny toerana misy ny fiteninao ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto?
An'arivony maro ireo mpiteny ny amerindiàna (fiteny voalohany) any amin'ny faritra Farihy Goavana (Great Lakes) ao Kanadà sy Etazonia. Aty Minnesota, mino aho fa misy an-jatony vitsivitsy mpiteny azy io, ary velom-pisaorana aho manana fahafahana miresaka aminy sy mianatra avy amin'ireo marobe amin-dry zareo, indrindra fa ireo avy amin'ny vondrom-piarahamonina Ponemah ao amin'ny Red Lake Nation. Feno fankasitrahana ihany koa an'ireo mpiteny avy ao Manitoba sy Ontario izay tonga mankaty Minnesota mba hiasa miaraka amin'ireo mpianatra ilay fiteny eto. Amin'ny alàlan'ny ezaka ataon'ireo mpiteny sy mpianatra, ny fiteny Ojibwe dia ampianarina amin'ny fomba maro samihafa, miainga avy amin'ny sekoly fampilomana ho an'ireo ankizy madinika ka hatramin'ireo kilasy ho an'ny olondehibe eny amin'ny anjerimanontolo, ary enga anie ireny fahafahana ireny mba hitohy hihitatra hatrany hatrany.
RV: Lohahevitra toa inona no kasainao hifantohana mandritra ny herinandro izay hitantanana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ?
Raisiko ho voninahitra ny nanasàna ahy handray anjara amin'ity hetsika santatra ity ary tena mientanentana aho momba ilay herinandro hoavy! Hiezaka aho haneho ny fomba fampiasàko ny fiteny Ojibwe eo amin'ny fiainako andavanandro rehefa mifanerasera amin'ny tontolo voajanahary, ny fiarahamonina mahazatra, ary ireo mpiara-mianatra amiko sy mpiteny ilay fiteny. Mandritra io herinandro io dia hozaraiko ety an-tserasera ireo loharano sy torohay fototra izay heverin'ny olona fa mety hanampy raha toa ry zareo ka manomboka mianatra ny fiteny Ojibwe. Fanampin'izay, faly aho hamaly izay fanontaniana rehetra momba ilay fiteny, ireo fangatahana hanao asa fandikàna, sns…araka izay tratry ny fahaizakoI — Raha tsy haiko izay fomba hamaliana azy, hanao izay tratra aho ny hitady. Tiako ny mamaly fanontaniana & mandray ireo fanontaniana rehetra ho matotra!
RV: Inona no tena antony manosika anao amin'ny fikatrohanoa an-tserasera ho an'ny fiteninao? Inona avy ireo fanantenanao sy nofinofinao ho an'ny fiteninao?
Ny tena manosika ahy hampiasa ilay fiteny ety anaty serasera sy anatin'ireo habaka nomerika hafa dia tsotra, ny hanampy hanorina sy hitantana sehatra misimisy kokoa ampiasàna ilay fiteny, ka sady ho tombony ho an'ny hafa no ho fandrosoana ho an'ny fianarako manokana ilay fiteny. Matetika io no manorisory ho an'ireo mpianatra satria ry zareo, ohatra, mety mianatra ilay fiteny any an-dakilasy saingy tsy dia manana toerana loatra hanaovany fampiharana azy. Marina manokana io ho an'ireo olona izay miaina aminà faritra jeografika tsy ahafahan-dry zareo mifanerasera mivantana amin'ireo hafa mianatra sy miteny ilay fiteny. Ny faniriako mba ho andraman'ny olona amin'ny hoavy dia ny hoe tsy hijery izay toerana misy azy ry zareo na izay tiany hatao, mba ho afaka ny hampiasa ny fiteny Ojibwe amin'ny fiainany isanandro amin'izay fomba rehetra tiany hampiharana azy.